Balaa Xiyyaaraa Itoophiyaa - BBC News Afaan Oromoo
'Boeing' rakkoo xiyyaara Max 737 mudateen dolaara biliyoona 5 baase
Kasaaraan Boeing mudate kun bu'aa inni waggaatti argachuu qabu kan gadi buuse ta'ullee Boeing garuu bara kana balalii ittan fufa jedha.
Suuraan maqaa xiyyaaraa "737 Max" ture '"737-8200" jedhutti geeddarame xiyyaarichi maqaa geeddaratee ba'aa jira shakkii jedhu kaaseera.
Balaa xiyyaaraa Boeing, Lion Air bara 2018 keessa mudateen firootasaanii kan dhaban maatiin wayita beenyaa fudhatan akka himannaa hin banneef dirqamaan akka mallatteessan godhamaniiru jedhu Abukaatonni maatiiwwanii.
'Boeing' bittaa xiyyaara 737 Max soddoma dhabe
Daandiin xiyyaaraa Saa'udii Arabiyaa 'Flyadeal' jedhamu karoora xiyyaarota 'Boeing' bituu haquun gara 'Airbus'tti jijjiire.
ET302: 'Haadha warraa fi ijoollee koo sadii balaa xiyyaaraa Itoophiyaatiin dhabe'
Maatii isaa guutuu balaa xiyyaaraa Itoophiyaa ET302'n kan dhabe Pool Injoroogee badii maatiisaarra gaheef 'Boeing' komata. Boeing 737 Max balaliisatti debi'uu hin qabu jedhe.
Balaa Xiyyaaraa ET302: 'Bu'aadhaaf jecha jireenya namaatti gatii baasuun hindanda'amu' maatii miidhamtootaa
Abbootiin seeraa maatii miidhamtoota balaa xiyyaara Itoophiyaa baatii Bitooteessaa keessa kufee caccabeen firotasaanii dhabanii, maallaqa beenyaa omishaan xiyyaara Boeing dhiyeesse hinfudhannu jedhan.
Balaa Xiyyaaraa ET302: Boeing maatii miidhamtootaaf beenyaa Doolaara miiliyoona 100 kenne
Boeing maatii balaawwan xiyyaaraa Itoophiyaa fi Indooneezhiyaatti mudateen miidhaman garagaaruuf doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 kenne.
Boeing 737 Max 8: Gara laaffeeyyii ummata Oromoo Tulluu Farraa
Jiraattoonni naannoo lafa xiyyaarri Itoophiyaa Beoing 737 Max 8 itti kufee caccabee naannoo Tulluu Farraa balaa qaqabeef akka firasaaniitti gaddan. Imimaan dhangalaasuun hirmii baafachuun alattis haaluma aadaa fi amantaatiin yaadannoo (taskaaraallee) baasaniiru. Gocha isaanii kanaafis kalleessa sirni galataa maatiin namoota du'aniitiin taasifameefiira.
Balaa Xiyyaaraa ET302: 'Lafee caccabe argeen, garaakoo keessaa naaf ba'uu dide,'' Aaddee Mulunash Bajigaa
Addee Mulunash Bajigaa maanguddoo fi jiraattuu naannoo lafa xiyyaarri itti kufee yoo ta'an, ergasiin booda halkanii guyyaa hirriiba malee akkuma boohuttin jira, jechuun BBC'tti himan.
Abbaan paayileetii xiyyaara ET302 kufee caccabee Dr. Getaachoo 'Irkoo koon dhabe' jedhu
Dr. Geetaachoo Tasammaa maanguddoo ganna 80ti. Gaddi jabaa sababa du'a ilma isaaniitin isaan mudate fuula isaaniirraa dubbifama.
Balaa Xiyyaaraa Ittoophiyaa: "Afaan na hidhamee, sammuunis gara na darbee ture" - Dr. Geetaachoo Tasammaa
Dhiifamni kaampaniin Boeing dhiyeenya gaafate 'kan barfateefi hamma barbaadamu miti' jedhan abbaan kaapiteen Yaareed, Dr. Geetaachoo Tasammaa.
Balaa Xiyyaaraa Itoophiyaa: 'Boeing' attamiin amanamummaa deebifachuu danda'a?
Balaa xiyyaaraa Itophiyaan booda 'Boeing' yoo maal godhe amanamummaa maamiltoota isaa deebifachuu danda'a?
Balaa Xiyyaaraa ET302: Boeing balaan uumame rakkoo softiweerii xiyyaarichaan ta'uu amane
Boeing balaa xiyyaara Itoophiyaa ET302 mudate rakkoo siistema meeshaa akka xiyyaarri hin dhaabbanne taasisu kan 'anti-stall system' jedhamuu ta'uu amane.